Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny sidina Air Astana dia manohy mankany Uzbekistan sy Kyrgyzstan
Air Astana dia manomboka manokatra ny tambajotran'i Azia Afovoany miaraka amin'ny sidina avy any Almaty mankany Tashkent, renivohitr'i Ozbekistan, izay nanomboka ny 11 septambra 2020 ary hatrany Bishkek, renivohitr'i Kyrgyzstan, nanomboka ny 20 septambra 2020. Ny serivisy Tashkent hiasa indray mandeha isan-kerinandro amin'ny alakamisy. Ny sidina Bishkek dia hiasa indroa isan-kerinandro amin'ny talata sy alahady miaraka amin'ny fifandraisana any Almaty ho an'ny serivisy Seoul, Korea.
Ny sidina dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fiaramanidina fianakaviana Airbus miaraka amin'ny ora sidina 1 ora sy 30 minitra avy any Almaty mankany Tashkent ary 55 minitra mankany Bishkek.
Niverina niasa tamin'ny tanànan'ny Seoul, Dubai, ny kaompaniam-pitaterana Frankfurt, Amsterdam, Kyiv, Istanbul, Antalya, ary Tashkent. Ny sidina mankany Georgia (Tbilisi sy Batumi) dia nofoanana tamin'ny Jolay, Aogositra, ary Septambra noho ny fanidiana ny habakabaka.
Ny olom-pirenen'ireo firenena izay nanohizan'i Kazakhstan ny sidina mivantana sy ireo nahazo alalana nomen'ny Vaomieram-panjakana eo anelanelan'ny governemanta Kazakhstan no afaka miditra amin'ny faritanin'i Kazakhstan mandritra ny fe-potoana fameperana ny quarantine. Ireo manampahefana dia namela ny sidina hiverina hiaraka amin'ny firenena maromaro, toa an'i Torkia, Sina, Korea atsimo, Thailand, Georgia, ary Japon. Ny famerenana ny sidina fanampiny dia hatao amin'ny dingana. Tsy misy fameperana hafa momba ny sidina iraisam-pirenena.
Ny fitondrana tsy misy visa, fidirana ary fialana amin'i Kazakhstan dia naato ho an'ny olom-pirenena amin'ny firenena vahiny maromaro hatramin'ny 1 Novambra 2020 mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta Repoblikan'i Kazakhstan. Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa kitiho eto na mifandraisa amin'ny Masoivohon'i Kazakhstan ao an-toerana.
Mba hanampiana amin'ny fanaraha-maso ny fiparitahan'ny coronavirus COVID-19, dia nanoro hevitra mafy ny Air Astana fa ny mpandeha amin'ny sidina iraisam-pirenena miainga an'i Kazakhstan dia hanao fitsapana PCR COVID-19 ao anatin'ny 96 ora (aorian'ny 48 ora fiainganana ho an'ny Korea sy Alemaina). Ireo mpandeha izay mahazo valim-panadinana tsara dia tsy tokony handeha ary afaka hamandrika indray ny tapakilan'izy ireo tsy misy sazy.
Fanavaozana ny lalàna momba ny fahasalamana sy ny quarantine dia azo jerena eto.
Sandals Resorts Wedding: Vahaolana “tonga lafatra”